Fampaherezana Nandritra ny Tour de France 2016
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Batak (Toba) Catalan Chichewa Chitonga (Malawi) Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Galicienne Grika Géorgien Haoussa Hebreo Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Javaney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Rarotonga Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tailandey Tiorka Tseky Valencienne Vietnamianina Xhosa Yorobà
Natao tamin’ny 2 ka hatramin’ny 24 Jolay 2016 ny andiany faha-103 amin’ny Tour de France, ilay fifaninanana hazakazaka am-bisikileta malaza eran-tany. Nisy fampihorohoroana nisesisesy tany Frantsa, herintaona talohan’io, ka 100 mahery no maty. Tsy vitan’izay fa nisy mpampihorohoro koa tany Nice, nandritra ny fetim-pirenena tamin’ny 14 Jolay 2016. Nitondra kamiao izy ka tonga dia nanitsy teny amin’ny olona be dia be nijery afomanga. Olona 86 no maty tamin’izay, ary betsaka no naratra.
Natahotahotra sy nisaona ny olona tany Frantsa. Tamin’izay mihitsy ny Vavolombelon’i Jehovah no vonona hanome fanantenana sy fampiononana ho azy ireo. Nanao fampirantiana teny amin’ny toerana rehetra fijanonana tamin’ilay Tour de France àry ry zareo, ka 1 400 mahery no nandray anjara tamin’izany. Be dia be ny olona nanana fanontaniana momba ny fiainana, ka nametraka boky sy gazety ara-baiboly 2 000 mahery ny Vavolombelona.
‘Feno anareo mihitsy hatraiza hatraiza an!’
Be dia be ny mpankafy an’ilay fifaninanana, ka mandeha manaraka an’ilay izy hatraiza hatraiza. Gaga be izy ireny fa mahita Vavolombelon’i Jehovah foana. Nilaza, ohatra, ny olona mikarakara an’ilay Tour de France hoe: “Ary tena feno anareo mihitsy hatraiza hatraiza an!” Tsy mba indray mandeha ry zareo no nidera ny Vavolombelon’i Jehovah, satria, hono, milamina ny fomba fiasan’ny Vavolombelona. Niaraka nikiakiaka hoatr’izao koa ny mpankafy an’ilay fifaninanana: “Oay, atỳ koa misy Vavolombelon’i Jehovah!” Ny mpitondra bisy anankiray indray tsy nandray taratasy mivalona nomena azy. Nanaja an’ireo mpitory anefa izy nilaza hoe efa nahazo taratasy mivalona efatra, hono, izy.
Gaga ny olona sasany nahita Vavolombelona foana, ka naka boky sy gazety teo amin’ny tabilao fampirantiana ry zareo. Sambany izy ireny no nanao an’izany. Anisan’izy ireny ny lehilahy iray mpiasan’ny televiziona mpilaza vaovao momba ny spaoro. Tadidiny hoe efa nahita Vavolombelona nanao fampirantiana izy nandritra ny Tour de France natao herintaona talohan’izay. Tapa-kevitra àry izy ny hanatona, ka ilay boky hoe Ny Tsiambaratelon’ny Fahasambaram-pianakaviana no nofidiny. Tena nahaliana azy mantsy ilay foto-kevitra. Novakiny tao anaty fiarany ilay boky, dia avy eo nilazany ny mpiara-miasa taminy hoe misy boky mahaliana amin’ireo tabilao fampirantiana. Naka boky sy gazety samihafa koa àry ry zareo.
Manome fanantenana sady azo atokisana
Nisy nitady Vavolombelon’i Jehovah ny olona nijery an’ilay fifaninanana. Nilaza tamin-dry zareo, ohatra, ny tovovavy iray fa kivy be izy ary nieritreritra ny hamono tena mihitsy aza. Saika hiantoraka teo anoloan’ny lamasinina izy. Nampahery azy anefa ny naheno ny vaovao tsara ao amin’ny Baiboly hoe hilamina be ny fiainana rehefa mitondra ny Fanjakan’Andriamanitra. Tapa-kevitra ny tsy hamono tena indray àry izy. Hoy koa ny vehivavy iray tamin’ny Vavolombelona: “Tsara be ny asa ataonareo fa tohizo!”
Nanaiky hampian’ny vehivavy iray Vavolombelon’i Jehovah ny lehilahy iray mitondra tehina. Nilaza izy fa tsy mba matokitoky olona tsy fantany izy, raha ny marina. Hoy anefa izy: “Matoky anao aho satria mitsikitsiky ianao. Maotina tsara koa ny fomba fitafinao.”
Iza no tena afaka mampionona anao raha nidonam-pahoriana ianao, na marary mafy, na nisara-panambadiana, na very asa?
Ezaka Manokana Hiresahana ny Fampanantenan’ny Baiboly any Paris